Rosary kuMoya oyiNgcwele ▷ ➡ Discover Online ▷ ➡️
El irosari kuMoya oyiNgcwele unomahluko othile kwi Ingcwele yeRosari zemveli. Kule nqaku siza kukunika zonke iinkcukacha kunye nemizekelo yendlela yokwenza ngayo.
1 Ubunyani beRosari kaMoya oyiNgcwele
3 Intsingiselo nokubaluleka
4 Uthandaza njani?
4.2 Iimfihlakalo ezisixhenxe
Ubunyani beRosari kaMoya oyiNgcwele
Nawuphi na okholwayo nothembekileyo kwimigaqo yamaKatolika, kuqhelekile ukwazi ukuba uMoya oyiNgcwele ebengumntu wasezulwini ongaziwayo ngabaninzi, kodwa unamandla amakhulu. Namhlanje kunye namanyathelo athathwe yicawe emva kweBhunga lesiBini leVatican, ukuzinikela kwayo kuye kwanda kakhulu.
Umntu wesithathu okanye isiseko esiyinxalenye yobathathu bomoya, ubonakalisiwe ngeendlela apho unokusetyenziswa khona. irosari. Injongo yethu namhlanje kukucacisa kwaye ichaze ubume bayo kunye nohlobo lwayo, ukuze abathembekileyo bazi umahluko ngerosari engcwele yemveli.
Olunye lweempawu ezibaluleke kakhulu ze irosari kuMoya oyiNgcwele ilele kwindlela ekwenziwa ngayo imithandazo; Bazinikele kuphela kuMoya oyiNgcwele, olilungu lesithathu ngaphakathi koBathathu Emnye oyiNgcwele. Kodwa ukuthandaza kuMoya oyiNgcwele nge-rosari kudlula ngaphaya kwamakholwa amaninzi.
Phakathi kweempawu zayo eziphambili kukuvumela amaKristu ukuba amisele unxibelelwano loMoya oyiNgcwele, kunye nentliziyo nomphefumlo wethu. Kwangokunjalo, yongeza ukholo kunye nethemba lobomi obungcono kunye neenceba ezibonelelwa yiNkosi, ukubonisa ukuzinikela kuBawo wethu nakuMariya njengohlobo lothando kubo bobabini.
Siyazi kakuhle ukuba igama "irosari" lithetha isithsaba seentyatyambo, ukuze xa ikholwa lenza imithandazo ngokusetyenziswa kwalo, lenza isenzo esilinganayo nokunikezela ngerosi yentlonipho kuMoya oyiNgcwele. Ngenxa yoko, xa iirosari yenziwe kweli ziko liphela, ukunikwa isithsaba seroses kufuzisela; Le meko yenza ukuba kube nako ukuqokelela uthotho lwemithandazo ethathelwa ingqalelo njengezipho ezibalulekileyo kubomi bomKristu.
Ukubaluleka kokuthandaza iRosari kuMoya oyiNgcwele kuyasekwa xa umntu okholwayo ethatha loo mzuzu okanye inxenye yobomi bakhe kwaye eyinikezela ngaphandle kwemeko. Libinzana elibhekisa kuYesu noMariya apho yonke inhlonipho njengekholwa iboniswa.
Ukuba siqaphela indlela ekuthandazwa ngayo iirosari zakudala, apho kuthandazwa khona kumama weNkosi, icwangciswe ngokwamaqela ama-5 eentsimbi ezili-10 inye, ekwahambelana nomthandazo weemfihlakalo. Kwimeko yeRosari kuMoya oyiNgcwele, zilungelelaniswe ngokwamaqela ayi-7 ngenani elifanayo lamaso ngalinye; La maqela ahambelana nezipho ezisi-7 ezibonakalisa ubume boMoya oyiNgcwele, ngendlela efanayo, iqela ngalinye linomthamo omkhulu ohambelana nomthandazo othile.
Njengazo zonke iziqalo zomthandazo werosari, uphawu lomnqamlezo kufuneka lwenziwe, emva koko kuthandazwe uMoya oyiNgcwele kufuneka kuthethwe, kulandele umthandazo wabapostile, uBawo Wethu noZuko kuYise; Nangona kunjalo, ngaphambi kokuqala ngeemfihlakalo okanye izipho, ungathandaza i-ejaculation, enokukhetha kwaye ungasebenzisa umthandazo kaFatima.
Nje ukuba imithandazo ekhankanyiweyo ifundwe, i iimfihlakalo zerosari kuMoya oyiNgcwele; Ke iqala ngesipho "soyika", esigcwalisa ngentlonipho kuThixo; isivakalisi senziwa amaxesha asixhenxe ahambelana nomtya we-7. Emva koko kuthandazwa "Inceba", esisipho sesibini kunye nemfihlakalo kaMoya oyiNgcwele: oku kusivumela ukuba sithande uThixo nayo yonke into enxulumene naye.
Imfihlakalo yesithathu sisipho saMandla, iyasinceda ukuba sime siqinile xa sijamelene nobunzima kwaye isinika isibindi sokunyamezela ukufikelela esiphelweni, imithandazo yamandla iyathethwa amaxesha asixhenxe. Imfihlakalo yesine sisipho solwazi, oku kuyasinceda ukuba sibone kwaye sive yonke into eyenziwe yiNkosi yethu, kunye nokunika ukubaluleka kwazo zonke izenzo zakhe. Umthandazo ohambelana nomtya we-7 uyafundwa kwaye uphindaphindwe amaxesha ama-7.
Imfihlakalo yesi-5 okanye ukucamngca ngesipho kubhekisa kwiBhunga. Ngale ndlela singafunda ukwenza ezona zigqibo zibalaseleyo; Njengangaphambili, imithandazo esi-7 iyafundwa, emva koko sinemfihlelo yesithandathu enxulumene nokuqonda, ngale nto kuyaqinisekiswa ukuba zonke iinyaniso zobuKrestu ziyinyani; Umthandazo ohambelana neeperile ezisi-7 uyafundwa kwaye uphindaphindwe amaxesha ama-7.
Ukuphelisa iRosari yoMoya oyiNgcwele, ukucamngca ngokufanelekileyo kuyenziwa kwaye nesipho sobulumko siyasetyenziswa; Le meko yeyona nto igqibeleleyo, kuba iyasivumela ukuba someleze ukholo lwethu kunye nethemba lethu, kusenza simthande nangakumbi uThixo wethu. Umthandazo ohambelana neeperile ezisi-7 uyafundwa kwaye uphindaphindwe kasi-7. Umthandazo uyathandazelwa ukugqibezela umthandazo wentsimbi nganye yerosari kweli qela, kulo mzekelo umthandazo ofanelekileyo kuMoya oyiNgcwele kuthiwa uthathela ingqalelo ezona zincinci ezincinci
Iimfihlakalo ezichaziweyo zikwangqinelana Izipho zoMoya oyiNgcweleNgamnye umele, njengoko besitshilo, i-rose, kwaye ikholwa lenza isicelo apho licenga khona esinye nesinye sezipho. Xa ebacela unika ithuba lokuzifumana ngokholo, azizizo iimpawu umntu anokuzihlakulela ngokwakhe, kodwa kufanelekile ukungenelela kukaThixo.
Ungalibali ukugcwalisa lonke olu lwazi ngemibuzo onokuthi uyenze kwi-portal yethu, ngale ndlela sinethemba lokuba uyakuthanda umxholo weli nqaku, wabelana ngalo nabahlobo bakho kumnatha wonxibelelwano ukhumbule ukuba ungalwandisa olu hlobo lwesivakalisi ngokufunda inqaku elilandelayo Thandaza iRosari eNgcwele.